Ecological Housing For Sale in Toronto, Ontario
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Bonke abanye abaThengisi beNdawo Indalo Ontario Toronto
I-54 Heathcote Ave, eToronto, Kwi-M2l1z1 | Amabala # C4506982 - J & d
Indawo emileyo ye-French Chateau kwi-Intanethi ye-Mills yase-York! Indawo entle yokuhlala! I-Masterfuly Designd kunye neyakhiwe! Ukusetyenziswa okubanzi kwesigidi se-Hi-End, i-Wainscoting, udonga lwe-Paneled, i-Buge-Ins, iMarble / Hrdwd Flr, iDropd / Cofd / Vaultd Cling, Halogen / I-Led Potlit.Ithala leencwadi laseMahogany! I-Master enkulu ye-W / indawo yokuHlela u-W / O ukuya kwiBalcony, Lrg ...
Kwintengiso | 5 iibhedi | 8 ibhafu
Published by Francesca Milan
umbono Indalo ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
Isakhiwo esiluhlaza (esaziwa njengokwakhiwa okuluhlaza okanye ukwakhiwa okuzinzileyo) kubhekiswa kwisakhiwo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo ezinoxanduva kokusingqongileyo kunye nezixhobo ezifanelekileyo kubomi bonke bomjikelo wesakhiwo: ukusuka kwisakhiwo ukuya kuyilo, ukwakhiwa, ukusebenza, ukugcinwa nokulungiswa ngokutsha, kunye nokudilizwa.  Ngamanye amagama, uyilo oluluhlaza lokwakha luquka ukufumana umlinganiso phakathi kokwakhiwa kwekhaya kunye nokusingqongileyo okuzinzileyo. Oku kufuna intsebenziswano esisondeleyo yeqela loyilo, abaqulunqi, iinjineli, kunye nomthengi kuwo onke amabakala eprojekthi.  Inkqubo yoLwakhiwo lweGreen iyandiswa kwaye ifezekisa imiba yoyilo loyilo lweklasikhi, uqoqosho, uzinzo, nentuthuzelo. [3 ] Ubunkokeli kubuNcedo beNdawo kunye neNdawo yokusiNgqongileyo (i-LEED) yiseti yeenkqubo zokulinganisa uyilo, ulwakhiwo, ukusebenza, kunye nokulungiswa kwezakhiwo eziluhlaza eziphuhliswe liBhunga loLwakhiwo lweGreen laseMelika. Enye inkqubo yenkqubo yezatifikethi eqinisekisa uzinzo kwezakhiwo yiBritish BESTAM (Indlela yoPhononongo lweNdawo yokuPhononongwa kweNdawo yokuHlala) ukulungiselela izakhiwo kunye nophuhliso olukhulu. Okwangoku, iBhunga leLizwe leHlabathi loLwakhiwo liqhuba uphando ngemiphumela yezakhiwo eziluhlaza kwimpilo kunye nemveliso yabasebenzisi bayo kwaye lisebenza kunye neBhanki yeHlabathi ukukhuthaza iiNdawo eziGciniweyo kwiiMarike eziKhulayo ngokugqwesa kwi-Edge yokuCwangciswa kweNkqubo yokuGuqulwa kweMakethi eNkulu kunye nesiqinisekiso.
I-Toronto yeyona dolophu iphambili ye-Ontario kunye nesona sixeko sinabantu abaninzi eCanada, sinabemi be-2,731,571 kwi2016. Okwangoku kwi-2016, i-Toronto census metropolitan area (CMA), apho uninzi luphakathi kwe-Greater Toronto Area (GTA), yabamba abantu be-5,928,040, beyenza ukuba ibe yeyona CMA yaseCanada. I-Toronto sisixhasi sendibano edolophini, ebizwa ngokuba yiGolden Horseshoe eseMazantsi e-Ontario, ekumda osentshona-nxweme weLwandle i-Ontario. Isixeko sehlabathi, iToronto liziko lezorhwebo, ezemali, ubugcisa nenkcubeko, kwaye yamkelwe njengelona dolophu elinenkcubeko kunye neendawo ezihlala abantu kwihlabathi liphela. Abantu baye bayihamba kwaye bahlala kwindawo yaseToronto, ebekwe kwithafa elibanzi lethambeka. ukungena phakathi kwemilambo, imilambo enzulu, nehlathi lasezidolophini, ngaphezulu kweminyaka ye-10,000. Emva kokuphikiswa okubanzi kweToronto, xa abakwaMississauga banikezela le ndawo kwi-Britane Crown, i-Britane yaseka idolophu yase-York e-1793 kwaye kamva bayibeka njengekomkhulu lase-Upper Canada. Ngexesha leMfazwe ye-1812, le dolophu yayiyindawo yeMfazwe yase-York kwaye yafumana ubunzima obukhulu yimikhosi yase-United States. I-York kwathiwa igama ngokutsha kwaye yafakwa kwi1834 njengesixeko saseToronto. Yonyulwe njengedolophu enkulu yePhondo le-Ontario kwi1867 ngexesha leCanadaan Confederation. Isixeko esichanekileyo ukususela oko sandise imida yaso yantlandlolo ngokusebenzisa zombini isihlomelo kunye nokudityaniswa kwindawo yangoku ye-630.2 km2 (243.3 sq mi). Inani labantu abahlukeneyo baseToronto babonisa indima yalo yangoku kunye nembali njengendawo ebalulekileyo yokufika kwabafuduki eCanada. Ngaphezulu kweepesenti ze-50 zabahlali abakwiqela elibonakalayo labemi abambalwa, kwaye ngaphezulu kwe-200 imvelaphi yobuhlanga imelwe phakathi kwabemi bayo. Ngelixa uninzi lwabantu baseTorontonia bethetha isiNgesi njengolwimi lwabo oluphambili, ngaphezulu kweelwimi ze160 zithethwa esixekweni. IToronto liziko eliphambili lomculo, ithiyetha, ukwenziwa kwemifanekiso eshukumayo, kunye nemveliso kamabonakude, kwaye ilikhaya kwikomkhulu losasazo olukhulu lwelizwe laseCanada. uthungelwano kunye neendawo zosasazo lweendaba. Amaziko awo enkcubeko ahlukeneyo, abandakanya iimyuziyam kunye neegalari, iminyhadala kunye neminyhadala kawonkewonke, izithili zokuzonwabisa, indawo zezembali zesizwe, kunye nemisebenzi yezemidlalo, etsala ngaphezulu kwabakhenkethi abazizigidi ze-25 ngonyaka. I-Toronto yaziwa ngee-skyscrapers zayo ezininzi kunye nezakhiwo eziphakamileyo, ngakumbi isakhiwo esime simahla e-Western Hemisphere, i-CN tower.Isixeko silikhaya kwi-Toronto Stock Exchange, ikomkhulu leebhanki ezinkulu zaseCanada, kunye ikomkhulu lamashishini amakhulu amakhulu aseCanada nakwamanye amazwe. Uqoqosho lwayo lwahlulwe kakhulu ngamandla kubuchwephesha, uyilo, iinkonzo zemali, isayensi yobomi, imfundo, ubugcisa, ifashoni, iinkonzo zeshishini, ukuveliswa kwendalo, iinkonzo zokutya nokhenketho.